Wanna Hear Me Sing? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 21 September 2009 Categories Information
6 thoughts on “Wanna Hear Me Sing?”
21 September 2009 at 5:21 am
ကောင်းသားပဲ ဆရာရဲ့… မသိရင် စန္ဒယားချစ်ဆွေ ဆိုနေသလိုပါပဲ…း)
21 September 2009 at 8:12 am
ဆရာ့အသံက သမ္ဘာရင့် အသံပဲ…။ အသံလည်းကောင်းတယ်.. ဆိုလည်း ဆိုတတ်တယ်…။ အဆုံးထိ နားထောင်ပြီးမှ ပြောတာပါ..
အဆိုတော်အသံနဲ့ တူလို့တောင် အံ့သြနေတယ်… ။
21 September 2009 at 7:19 pm
သိပ်မြှောက်မပေးနဲ့နော်… တော်ကြာ ဟိုတစ်ယောက်လို အိုကြီးအိုမကျမှ သီချင်းတွေ ထသွင်း၊ ဟိုမော်ဒယ်ဖက်၊ သည်မင်းသမီးဖက်နဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်မိကုန်လိမ့်မယ်… 😀
21 September 2009 at 8:34 am
Thanks for your information, thanks. 🙂
22 September 2009 at 2:32 pm
တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အသံပဲ…ဘကြီး မြှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခွေလောက်ထုတ်ကြည့်ပါလား။ 😀
ဘကြီးပြောတဲ့ဟိုတစ်ယောက်ကတော့ ပြောမနေနဲ့။ သူ့သီချင်းပေါက်ပေါက် မပေါက်ပေါက် တစ်ခွေပြီးတစ်ခွေထုတ်နေတာပဲ။
အသက်ကြီးမှ သူငယ်ပြန်နေတာဖြစ်မယ်။ 😛
22 September 2009 at 5:19 pm
ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ မြှောက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ချီးကျူးခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။
Previous Previous post: Time Has Already Told…
Next Next post: On Contemporary Burmese Literature